အအေးဓာတ်ရည်သည် အပူစွန့်တိုင်ကီကို အလွန်အေးသောအခြေအနေတွင် အေးခဲခြင်း(အေးခဲမှု-ကာကွယ်)မှ တားဆီးပေးသည်၊ သို့မဟုတ် အလွန်ပူသောအခြေအနေ (အပူလွန်ကဲမှုကာကွယ်) ကို တားဆီးပေးသည်။
ထို့အပြင် အအေးပေးစနစ်၏ ချေးတက်ခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းကိုလည်း ကာကွယ်ပေးသည်။
DENSO မှ အမျိုးအစား ၂ ခု ထုတ်လုပ်ထား၏- Long Life Coolant (LLC) နှင့် Super Long Life Coolant (SLLC) တို့ဖြစ်၏။
အေးခဲမှု-ကာကွယ်ခြင်း ရှိသည့်အတွက် အအေးဓာတ်ရည်သည် အေးမြသောရာသီဥတုများ၌ စနစ်အတွင်း အရည်အဖြစ် လည်ပတ်ကာ အင်ဂျင်ကိုအေးစေလျက် ပျက်စီးခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။
ပူပြင်းသောရာသီဥတုများ သို့မဟုတ် ခရီးရှည် မောင်းနှင်ရသည့်အခါများတွင် အအေးဓာတ်ရည်သည် ဆူပွက်ခြင်းကို ခုခံလျက် အရည်အဖြစ်လည်ပတ်ကာ အင်ဂျင်ကို အေးစေပါသည်။
ချေးတက်ခြင်းနှင့် တိုက်စားခြင်းတို့သည် အပူစွန့်တိုင်ကီ နှင့် အခြားအင်ဂျင်အပိုင်းများ ( ဥပမာ၊ ရေပန့်၊ အပူထိန်း၊ အပူစွန့်တိုင်ကီဖုံး၊ ပိုက်ခေါင်းနှင့် ဆိုက်ညှိခေါင်းများ)ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။ ၎င်းသည် အပူစွန့်တိုင်ကီ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ကျဆင်းစေကာ အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ တိုက်စားခြင်းကြောင့် ဖြစ်လာသောအပေါက်များက အအေးဓာတ်ရည် ယိုစိမ့်မှုကို ဖြစ်စေသည်။
DENSO SLLC ကို အသုံးပြုလျှင် ပြုပြင်လဲလှယ်ရမှု ကြိမ်ရေ နည်းပါးသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ပိုမိုချွေတာနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
LLC လဲလှယ်ရမှု အချိန်ကာလ
ကားအသစ်- ၇ နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၆၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၄ နှစ် (သို့မဟုတ် ၈၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
ကားအသစ်- ၃ နှစ်
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၂ နှစ်
ကားအသစ်- ၁၁ နှစ် (သို့မဟုတ် ၂၀၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၆ နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၂၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
ကားအသစ် - ၃ နှစ်
ကားအသစ်- ၉ နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၈၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
ကားအသစ်- ၅ နှစ်
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၄ နှစ်
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၄ နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၀၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
ကားအသစ်- ၁၁ နှစ် (သို့မဟုတ် ၂၂၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၆ နှစ်
ကားအသစ်- ၇ နှစ် (သို့မဟုတ် ၁၅၀၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
အလုံးစုံ လဲလှယ်ပြီးနောက်- ၄ နှစ်(သို့မဟုတ် ၇၅၀၀၀ ကီလိုမီတာ)
မသန့်ရှင်းသောရေများသည် အအေးဓာတ်ရည်၏ စွမ်းရည်ကို ထိခိုက်နိုင်သည်။ ကြို-ရောစပ်မှု က အရည်အသွေးကောင်းသော ရေကိုအသုံးပြုထားကြောင်း သေချာစေသည်။
ပြုပြင်ခြင်း နှင့် လဲလှယ်ခြင်း
အရန်တိုင်ကီကို 600ml ပမာဏအထိ သဘာဝအငွေ့ပျံခြင်းအား ၂ နှစ်ကြာသုံးစွဲနိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။
သဘာဝအငွေ့ပျံခြင်းပမာဏမှာ တစ်နှစ်လျှင် 300ml ခန့် ရှိနိုင်၏။
အအေးဓာတ်ရည် ပြတ်တောက်မှုက အပူလွန်ကဲခြင်းကို ဖြစ်စေ၏ (အင်ဂျင်ကို အေးစေဖို့ အအေးဓာတ်ရည်မလုံလောက်၍ဖြစ်၏)။
အအေးဓာတ်ရည် လဲလှယ်ရာတွင် အရန်တိုင်ကီရှိ အအေးဓာတ်ရည်အမှတ် လျော့ကျသည့်အခါ ဖြည့်တင်းဖို့ အကြံပြုပါ၏။
ကာလရှည် မောင်းနှင်လာသော ကားတွင် ဖုန်-ကာကွယ် ပစ္စည်းနှင့် Ethylene Glycol (အေးခဲမှုကာကွယ်သည့်အဓိကပစ္စည်း) အောက်ဆီဒိုက်ဇေးရှင်းများ ကျဆင်းလာပါသည် .
သတ္တုတွင် ချေးတက်ခြင်းနှင့်တိုက်စားမှုများဖြစ်ကာ ရေပါဝင်မှု စုံပုံလာခြင်းများ ဖြစ်လာနိုင်သည်။
အအေးဓာတ်ရည်မှာ ကောင်းစွာ မစွမ်းဆောင်နိုင်ပါ။ ယင်းက အင်ဂျင်ပျက်စီးမှု နှင့် အပူလွန်ကဲမှုကို ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် SLLC ကို အနည်းဆုံး ၄ နှစ် သို့မဟုတ် ၆၀၀၀၀ ကီလိုမီတာခန့် စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။ အထက်ပါဇယားတွင် လဲလှယ်ရန်အချိန်ကာလ၊ သို့မဟုတ် သင့်ကားလက်စွဲစာအုပ်တွင် ကြည့်ပေးပါ။
အမေး- ဒီထုတ်ကုန်ကို အခြားထုတ်ကုန်များနဲ့ ရောစပ်သုံးနိုင်ပါသလား။
အဖြေ- မရပါ၊ အခြားထုတ်ကုန်များနဲ့ ရောစပ်အသုံးမပြုနိုင်ပါ။ အခြားထုတ်လုပ်သူများမှ ပြုလုပ်သော ထုတ်ကုန်များသည် SLLC ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကျဆင်းစေနိုင်ပြီး အင်ဂျင်ထဲရှိ အအေးပေးစနစ်ကို ပျက်စီးစေနိုင်သည်။
အမေး- အရန်တိုင်ကီထဲရှိ SLLC နည်းပါးလာသည့်အခါ ရေထပ်ထည့်ဖို့ အဆင်ပြေလား။
အဖြေ- မရပါ၊ ထုတ်ကုန်ထဲတွင် ရေရောထားပြီးဖြစ်လို့ ယင်းအတိုင်း အပြည့်လဲလှယ်မှု သို့မဟုတ် ပြန်လည်ဖြည့်တင်းမှုဖြင့်သာ သုံးနိုင်သည်။ လက်ကျန်အရည် နည်းပါးလာလျှင် နဂိုရှိရင်း အတိုင်း ထပ်ဖြည့်နိုင်ပါတယ်။ ရေရောထည့်ခြင်းသည် SLLC ၏ အာနိသင်ကို ၃၀% အောက်နိမ့်ကျစေနိုင်ပြီး အေးခဲခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် တိုက်စားမှု ကာကွယ်ခြင်းကို ကျဆင်းစေ၏။
အမေး- အသုံးပြုရန် LLC အာနိသင်ပမာဏ မည်မျှလိုအပ်ပါသနည်း။
အဖြေ- ပုံမှန် ၃၀%. အေးသောဧရိယာ၊ ၅၀%. အာနိသင်များနေလျှင် (၆၅% ထက်မနည်းလျှင်)၊ အေးခဲမှတ်သည် မြင့်တက်လာပါလိမ့်မည်။ ထို့ကြောင့် သင့်တင့်သောအာနိသင်ကို မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရပါမည်။ အထက်ဖော်ပြပါ ဇယားကို ကြည့်ပေးပါ ( “ကြို-ရောစပ်မှု” ပမာဏတွင် မှန်ကန်သော ကြို-ရောစပ်မှုအဆင့်ကို စစ်ကြည့်နိုင်ပါသည်။
အမေး- ပူနွေးသော ဒေသများတွင် အာနိသင်ကို ၃၀% အောက်သုံးလျှင် ပြဿနာရှိနိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ရှိပါတယ်။ ယင်းက တိုက်စားမှုကာကွယ်ရာတွင် စိတ်ပျက်ဖွယ်ရာဖြစ်စေပြီး၊ အေးခဲခြင်း ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်မှာလည်း လုံလောက်ရုံအဆင့်တွင်သာရှိနေနိုင်သည်။
အမေး- ကျွန်ုပ်ကားတွင် ရှိသော အအေးဓာတ်ရည်အရောင်နှင့် ကွဲပြားသော အအေးဓာတ်ရည်ကို သုံးနိုင်ပါသလား။
အဖြေ- ခြားနားသော အအေးဓာတ်ရည်အရောင်များကို ရောသုံးခြင်းက ဘာပြဿနာမျှ မရှိနိုင်ပါ။ အအေးဓာတ်ရည်၏အရောင်မှာ ကြောင်စီစီဖြစ်နေပါမည်။ SLLC နှင့် LLC ကို ရောနှောလိုက်လျှင်တော့ အအေးဓာတ်ရည်သည် LLC အဖြစ်သာ စွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မည်။